सुन तस्कर दारुका र पोद्दारसहित ५ जना मोरङ कारागारमा ! - सुन तस्कर दारुका र पोद्दारसहित ५ जना मोरङ कारागारमा !
सुन तस्कर दारुका र पोद्दारसहित ५ जना मोरङ कारागारमा !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० असार, 01:26:17 PM
काठमाडौं । एक्लैले ८ क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी गरेर अकुत सम्पति कमाएको स्वीकार गरेका बीरगंजका नामुद सुन तस्कर राजकुमार दारुकालाई उच्चस्तरीय छानविन समितिले मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।
सार्वजनिक मुद्दामा प्रक्राउ गरि छानविन थालेको समितिले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट एक हजार धरौटीमा छुटे लगत्तै पुन प्रक्राउ गरि मोरङ जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सुन तस्करीको मुद्दा चलाउन पठाएको हो । यस्तै सो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिले पछिल्लो अवधिमा नियन्त्रणमा लिएका अन्य ४ जनालाई पनि मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। छानविन समितिले उनीहरुसित बयान लिएपछि बुधवार मोरङ र्पुयाइएको हो ।
मोरङ लगिएकाहरुमा हुण्डी व्यवसायी विमल पोद्धार र प्रविण अग्रवाल, डब्बु भनिने इम्तियाज अलि र अबर शाह छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराधमा आजै १० दिनको म्याद थपगरी अनुसन्धान गरिरहेको डिएसपी निशान्त थापाले बताए । छानविन समितिले व्यापारी पोदारलाई गत असार ५ गते, अबर शाहलाई ८ गते र अग्रवाल र अलिलाई ९ असारमा पक्राउ गरेको थियो भने दारुकालाई असार १२ गते पक्राउ गरिएको हो ।
अदालतद्धारा १० दिनको म्याद थप
सुन तथा हुण्डी व्यवसायी पोदार डिल्लीबजारमा रहेको कार्यालयबाट समातिएका थिए। उनले तस्करीको सुन बिक्री वितरण गरेवापत संकलित रकम दुवई तथा अन्य मुलुकमा पठाउने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । तर, उनले भने आफू सुन तस्कर नभएको दावी गरेका छन् । मोरङको अनुसन्धान सकिए लगत्तै उनीहरुमाथि सम्पति शुद्दीकरणको थप मुद्दासमेत चलाईने तयारी भैरहेको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन् । तस्करीमा संग्लङ अन्य तस्करहरुको खोजी पनि समितिले गरिरहेको छ ।
सुन तस्करी प्रकरण : व्यापारी राजु द्वारका पक्राउ
२०७५, २० असार, 01:26:17 PM